Emulsification Factory - mpanamboatra sy mpamatsy emulsification China
Fitaovana ultrasonian'ny lab
Rafitra fivezivezena ultrasonic mizana kely
Rafitra fivezivezena 5L
Rafitra mihodina 10L
Rafitra mihodina 20L
Rafitra fanodinana fitaratra
Rafitra mihodina vy tsy miova
Fitaovana Ultrasonic indostrialy
Rafitra fihodinan'ny ultrasonikaly mizana
Rafitra boribory misaraka
Rafitra mivezivezy mitohy
Fanamafisana ny tanky vy
Famolavolana vahaolana ankapobeny sy fanamboarana vokatra
Fielezana karbonika nanotubes
Fielezana ny ranomainty
Fanamafisana ny diloilo CBD
Fanamafisana ny biodiesel
Fanamafisana tarehy kosmetika
milina fambolena ultrasonic milina fitrandrahana pectin
emulsifier menaka CBD ilaina amin'ny ultrasonic
Fitaovana ultrasonian'ny laboratoara misy boaty tsy misy feony
Mpanamboatra ranon-tsolika ultrasonic indostrialy
Fitaovana fitrandrahana ultrasonika mikoriana
fitaovana fanaparitahana graphene ultrasonic
Fitaovana emulsifying ultrasonic ho an'ny fanodinana biodiesel
Fitaovana fanodinana ranoka ultrasonic
Sonicator fanadihadiana momba ny ultrasound
Masinera ultrasound 3000W ho an'ny emulsifier homogenizer nanoemulsion
Nanoemulsion dia ampiharina bebe kokoa amin'ny simika, fanafody, kosmetika, sakafo, vokatra fitsaboana, indostrian'ny fanontana sy fandokoana. Ny emulsification ultrasonic dia manaparitaka ny vongan-drano roa na mihoatra ranon-javatra amin'ny alàlan'ny fihoaram-pefy 20000 isan-tsegondra, ka mifangaro. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra mitohy an'ny emulsion mifangaro dia mahatonga ny poti-droplet an'ny emulsion mifangaro hahatratra ny haavon'ny nanometera. SPECIFICATIONS: MODELE JH-BL5 JH-BL5L JH-BL10 JH-BL10L JH-BL20 JH -...
Ny fitrandrahana rongony (CBD, THC) dia molekiola hydrophobic (fa tsy mety levona amin'ny rano). Mba hanoherana ny tsy fahalavorarian'ny cannabinoids anaty rano hampidirana sakafo, zava-pisotro sy menaka dia ilaina ny fomba emulsification. Ny emulsifier an'ny solika CBD ilaina amin'ny ultrasonic dia mampiasa hery mahery vaika amin'ny cavitation ultrasonic mba hampihenana ny haben'ny vongan-dranon'ny cannabinoids hamokarana nanoparticle, izay ho kely kokoa noho ny 100nm. Ultrasonics dia teknolojia ampiasain'ny orinasa pharmaceutika f ...
Fitaovana emulsification fanaparitahana kosmetika ultrasonika
Ny fitaovana ultrasonic dia azo ampiasaina amin'ny kosmetika ho an'ny fitrandrahana, fanaparitahana ary fanamafisana. FITSIPIKA: Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fitrandrahana ultrasonic dia ny fampiasana solvent maitso: rano. Raha ampitahaina amin'ny solvent solita mahery ampiasaina amin'ny fitrandrahana nentim-paharazana dia manana fiarovana tsara kokoa ny fitrandrahana rano miaraka amin'izay. FIVORIANA: Ny herin'ny fanetezana be dia be ...
fitaovana famokarana kosmetika ultrasonic
Mampiasà solvent maintso: rano.
Arotsaho ho sombin-javatra nano ny sombiny.
Ampidiro amin'ny fomba feno ny akora isan-karazany ary hanatsara ny fahombiazan'ny menaka.
Ny biodiesel dia karazana solika diesel azo avy amin'ny zavamaniry na biby ary misy esera asidra lava-lava. Matetika izy io dia vita amin'ny lipida mihetsika ara-simika toy ny tavy biby (lava), menaky ny soja, na menaka legioma hafa misy alikaola, mamokatra methyl, etil na estera propyl. Ny fitaovana famokarana biodiesel nentim-paharazana dia azo zahana amina andiam-bolo ihany, ka mahatonga ny fahombiazan'ny famokarana tena ambany. Noho ny fanampian'ny emulsifiers maro, ny vokatra sy ny kalitaon'ny biodiesel dia ...
Fitaovana emulsification ultrasonic ho an'ny biodiesel
Biodiesel dia fifangaroan'ny menaka legioma (toy ny soja ary ny voan'ny tanamasoandro) na ny tavy biby sy ny alikaola. Raha ny marina dia dingana transesterification io. Dingana famokarana biodiesel ： 1. Afangaro ny menaka legioma na tavy biby amin'ny methanol na etanol ary sodium methoxide na hydroxide. 2. Fanamafisana herinaratra ny ranoka mifangaro hatramin'ny 45 ~ 65 degre Celsius. 3. Fitsaboana ultrasonic an'ilay ranoka mifangaro hafanana. 4. Mampiasà centrifuge hanasaraka glycerine hahazoana biodiesel. SPECIFICATIONS: MODEL JH1500W-20 JH20 ...
fitaovana emulsification menaka rongony ultrasound ho an'ny emerion nano-emulsion
Ny sombintsombin'ny CBD dia azo aparitaka etsy ambany nanometera 100 hamokatra viscosity ambany sy nanoemulsion marin-toerana. Hatsarao tsara ny fampiasana CBD.
masinera emulsification menaka CBD ultrasonic
Ny emulsion menaka CBD vokarin'ny ultrasonika dia matetika miorina amin'ny tena tsy misy emulsifier na surfactant. Ny ain'ny fitaovantsika dia mihoatra ny 20 000 ora ary afaka miasa tsy tapaka mandritra ny 24 ora isan'andro.
fitaovana emulsification menaka ultrasonika
Hery 1.5 ~ 3KW, 8 ~ 100μm amplitude, 10 ~ 25L / min. Taham-pivoahana. Afaka manaparitaka ny CBD hatramin'ny ambany noho ny 100nm. Afaka manao ny CBD hanana anjara toerana tsara kokoa amin'ny vokatra fikarakarana hoditra isan-karazany sy fanafody amin'ny fampiasana ivelany sy anatiny.